पाकिस्तानकाे पक्ष लिएपछि चीनमा भारतकाे सक्रियता ! - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
पाकिस्तानकाे पक्ष लिएपछि चीनमा भारतकाे सक्रियता !
२७ साउन, एजेन्सी । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मीर मुद्दा चर्किएका बेला भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्डयम जयशंकरले सोमबार चीनका समकक्षी वांग यीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
जयशंकरले दुई देशबीच कुनै पनि आपसी मतभेद विवादको कारण बन्न नहुने बताए । भारतले चीनसँग कारोबार सम्बन्ध बलियो बनाउने र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा जोड दिएको छ । यसअघि जयशंकरले उपराष्ट्रपति वांग किशानसँग उनकै निवासमा भेट गरेका थिए । जयशंकर चीनको तीन दिने भ्रमणका क्रममा छन् ।
विदेशमन्त्रीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जयशंकले भने, गत वर्ष भएको बैठकमा हामीले सांस्कृतिक आदानप्रदानका लागि १० बुँदामा छलफल गरेका थियौं । हामी १ सय अलग अलग गतिविधि अनुसार यसलाई अघि बढाउँछौं ।
उनको चिनियाँ समकाी वांगले जयशंक भारतको राजदुत बनेर धेरै पहिलादेखि काम गरिरहेको भन्दै उनको सक्रियता बमोजिम भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । भारतले जम्मू कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज गरेपछि पाकिस्तानसँगको तनावबारे भएको छलफल सार्वजनिक नगरिएपनि गम्भीर छलफल भएको अनुमान गरिएको छ ।
भारतको निर्णयलगत्तै चीनले पाकिस्तानको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर चीन पुगेका हुन् । यसअघि पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीले पनि चीनको भ्रमण गरेका थिए ।
Previousसाहोको लागि ७ करोड लिएकै हुन् त श्रद्धाले ?
Nextप्रदेश सरकारविरुद्ध आठ मुद्दा